महिला लघुवित्तको सेयर बन्यो ब्लु चीप, १० कित्ताबाट दुई महिनामै ३७ हजार कमाई !
काठमाडौं । महिला लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर नेपाली पुँजी बजारमा ब्लुचीप बन्ने दिशामा अघि बढिरहेको छ । फागुन तेस्रो साता नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत भएको महिला लघुवित्तको सेयर मूल्य सोमबारसम्ममा
काठमाडौं । आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ८.८५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । संस्थाको पाँचौँ वार्षिक साधारणसभाले गत आव २०७६/७७ सम्मको मुनाफाबाट प्रस्ताव गरिएको यो लाभांश प्रदान गर्ने
काठमाडांै । प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेडको २७ औं वार्षिक साधारणसभाले सेयरधनीलाई ११.०५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने सञ्चालक समितिको प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको छ । सोमबा कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय, प्रिमियर
अन्ततः अजोड इन्स्योरेन्सको ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’माथि छानबिन गरिने
काठमाडौं । अजोड इन्स्योरेन्सको सेयरमा गतसाता भएको इन्साइडर ट्रेडिङमाथि अन्ततः छानबिन गरिने भएको छ । पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले नै छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको हो । बोर्डले
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले जारी गरेको डिबेन्चर ओभर सस्क्राइब भएको छ । बैंकले गत चैत्र १ गते ग्लोबल आइएमई बैंक डिबेन्चर २०८६÷८७ निष्काशन गरी बिक्री खुला गरेको थियो
नागरिक लगानी कोषको ९ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। कोष सञ्चालक समितिको चैत २१ गते बिहान बसेको बैठकले शेयरधनीलाई वितरणा गर्ने लाभांश प्रस्ताव गरेको हो। कोषले
मेरो सेयरले सधैँ तनाव, सीडीएससी समस्याले सिंगटी हाइड्रोको बाँडफाँट धकेलियो
काठमाडौं । मेरो सेयर सफ्टवेयरमा बारम्बार समस्या देखिन थालेको छ । केही दिनयता बारम्बार समस्या देखिँदा यसले लगानीकर्तामा समस्या थपिएको छ । मेरो सेयर सफ्टवेयर नचल्दा लगानीकर्ताले बेचेको सेयर समयमै
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको सञ्चालकमा अम्बिकाप्रसाद पौडेल निर्विरोध निर्वाचित हुने भएका छन् । बिहीबारसम्ममा सर्वसाधारण सेयरधनीका तर्फबाट सञ्चालकमा उम्मेदवारी दिने मिति तोकिएकोमा पौडेलको मात्र उम्मेदवारी परेसँगै उनी निर्विरोध निर्वाचित हुने
महिला लघुवित्तको सेयर आजदेखि नेप्सेमा, मूल्यको सीमा ९३९ रुपैयाँसम्म !
काठमाडौं । महिला लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकरण भएको छ । अघिल्लो साता बाँडफाँट भएको महिला लघुवित्तको ओपनिङ रेञ्ज भने आकर्षक निर्धारण गरिएको छ । स्टक एक्सचेञ्जका
ग्लोबल आईएमईको ३ अर्बको ऋणपत्र आजदेखिः ८.५ प्रतिशत ब्याज, कति आवेदन गर्ने ?
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले ऋणपत्र आइतबारदेखि बिक्री खुला भएको छ । बैंकले प्रतिइकाई १ हजार रुपैयाँ दरमा ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र बिक्री गर्न लागेको हो । यो ऋणपत्रमा